Howlgal ka dhan ah Musuq maasuqa oo ka bilowday Puntland – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Hay’addaha kala duwan ee maamulka Puntland ayaa waxaa ka bilowday howlgal weyn oo lagula dagaallamaayo Musuq Maasuqa oo ka mid ah waxyaabaha dhibaatada ku haya Wasaaraddaha maamulka Puntland.
Dardargalin ayaa lagu bilaabay Hay’addaha kala duwan ee Maaliyadda maamulka Puntland xilli ay jiraan shaqsiyaad loo xiray Musuq maasuq.
Puntland waxa ay sheegtay in ay xirtay dhowr qof sidoo kalena ay baaritaano ay ku socdaan qaar ka mid ah Madaxda Maaliyadda ee ku sugan Magaalooyinka maamulka Puntland.
Wasiirka Maaliyadda Puntland Xassan Shire Cabdi ayaa shalay magaalada Boosaaso ka sheegay in ay jiraan shaqaale ka tirsan wasaaraddiisa oo loo xiray musuq maasuq isagoo xusay in maxkamad la horgeyn doono dadkaasi ku eedaysan musuq maasuqa.
Shaqo joojin lagu sameeyay Hay’adda Amin Ambulance